Ukuhlaziywa kwesimo samanje kanye nethemba lokuthuthuka lemakethe yaseChina yezimoto ngo-2020
Imoto yerabha hose yingxenye eyinhloko yohlelo lwamapayipi ezimoto, olusetshenziswa kakhulu ezimotweni, isithuthuthu, imishini yobunjiniyela, ezokumbiwa phansi, insimbi, uphethiloli, imboni yamakhemikhali neminye imikhakha eminingi. I-hose yezimoto yingxenye enkulu yemakethe embonini yamapayipi. Izithuthi ho ...
ULinhai Qisheng uhambele i-15th Automechanika Shanghai
Kusukela ngoDisemba 3 kuya ku-6, 2019, i-15th Automechanika Shanghai ibibanjelwe eShanghai National Convention and Exhibition Center. Njengenkampani yokukhiqiza ithumbu lenjoloba eneminyaka engama-20 yesipiliyoni semboni, uLinhai Qisheng ubonakale kulo mcimbi wemboni ngobubanzi bawo obugcwele bemigqa yomkhiqizo, ...
ILinhai Qisheng Ithole Izitifiketi Ezinhlanu Zokusetshenziswa Kwemodeli Entsha
Muva nje, uQisheng usethole izitifiketi ezintsha eziyisihlanu zezinto ezisetshenziswayo zobunikazi. Ziyi "hose yenjoloba enocingo lwensimbi", "Ipayipi le-silicone elinezingqimba eziqinisa ukushibilika", "Ukusebenza okuphezulu kokushisa okuphezulu nokumelana nelangabi okuvimbela i-silicone hose", "Kulula ukufaka ...